Kooxda Sao Paulo oo soo bandhigtay saxiixeeda cusub ee Dani Alves, xilli loo xiray lambar cajiib ah… + SAWIRRO – Gool FM
Kooxda Sao Paulo oo soo bandhigtay saxiixeeda cusub ee Dani Alves, xilli loo xiray lambar cajiib ah… + SAWIRRO
Haaruun August 7, 2019
(Sao Paulo) 07 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta Sao Paulo ee dalka Brazil ayaa saxaafadda u soo bandhigtay saxiixeeda cusub ee Dani Alves.
Daafacan da’da ah ayaa ku soo biiray kooxda Sao Paulo kaddib markii uu ka dhacay heshiiskii uu ku joogay kooxda reer France ee PSG, iyadoo la la xiriirinayey saxiixiisa kooxo dhowr ah oo ka dhisan qaaradda Yurub, hayeeshee waxa uu doortay inuu ku biiro kooxda ka dhisan dalkiisa hooyo ee Brazil.
36-sano jirkaan Alves, ayaa u saxiixay kooxda reer Brazil heshiis ku eg illaa sanadka 2022-ka, waxaana uu dib ugu laabtay ka ciyaarista dalkiisa hooyo markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2002 markaasoo uu ka soo tagay kooxda Bahia.
Dani Alves ayaa sheegay inuu doonayo inuu taariikh ka sameeyo kooxda Sao Paulo isla markaana uu isku dayo inuu xulkiisa qaranka Brazil ku matalo koobka adduunka ee sanadka 2022-ka.
Daafacan kaasoo koobab badan ku guuleystay mudadii uu ka ciyaarayey Yurub, waxaana ka mid ah koobabkaas lix horyaalka La Ligaha Spain ah iyo saddex Champions league oo uu la qaaday Bracelona ka hor inta uusan ku biirin kooxaha Juventus iyo Paris Saint-Germain oo laftooda uu horyaallo kula guuleystay.
Dani Alves ayey kooxda Sao Paulo u gacan gelisay lambarka 10-aad, taasoo ka yaabisay inta badan dadka la socda ciyaaraha, maadaama laacibkan uu ka ciyaaro dhanka daafaca.
Kooxda Dekedda oo maanta ka duushay garoonka diyaarahada Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho… + SAWIRRO
Muxuu ka yiri Gerard Pique wararka la xiriirinaya Coutinho inuu ka tagayo kooxda Barcelona?